ब्रेव बनाम सल्लाहकार: भिन्नताहरू, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु कम्पनी, समाचार प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, समाचार मनोरञ्जन समाचार, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी भारी खेल समुदाय
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> ब्रेव बनाम सल्लाहकार: भिन्नताहरू, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
ब्रेओ र एडवायर दुबै इनहेलेटेड पर्चेको औषधि हुन् जुन COPD (पुरानो अवरोधक फुफ्फुसीय रोग) र दम उपचारको लागि संकेत गरीन्छ। प्रत्येक औषधिले लामो-अभिनय बीटाको साथ एक इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड (ICS) समावेश गर्दछदुई-Adrenergic एगोनिस्ट (LABA)।
आईसीएस कम्पोनेन्ट, जुन प्रत्येक औषधीमा फ्लूटिकासोन हुन्छ, फोक्सोमा सूजन कम गर्न मद्दत गर्दछ। लेबो कम्पोनेन्ट, जुन ब्रियोमा विलेन्टरल र एडवायरको सालमेटरोल हो, यसले मांसपेशीहरूलाई आराम दिएर फोक्सोमा वायुमार्ग खोल्न मद्दत गर्दछ। ब्रियो केवल ब्रान्ड नाममा उपलब्ध छ; यो GSK, वा GlaxoSmithKline द्वारा बनाईएको हो।
सल्लाह ब्राण्ड र जेनेरिकमा उपलब्ध छ; ब्राण्ड पनि GSK द्वारा बनाइएको हो। Mylan एक ब्रान्डेड जेनेरिक (एक स्वामित्व नाम को एक सामान्य औषधि) बनाउँछ, Wixela Inhub भनिन्छ। ब्रियो र सल्लाहकार हुन् पाउडर इनहेलरहरू मतलब, क्याप्सुलको सामग्रीहरू इनहेल हुन्छन्। एडवायर एचएफए एक मिटर-डोज इनहेलर हो। ब्रियो र सल्लाहकारका धेरै समानताहरू छन्, तर केहि उल्लेखनीय भिन्नताहरू पनि।
xyzal र zyrtec बीच के फरक छ?
ब्रेओ बनाम सल्लाहकार बीच के मुख्य भिन्नताहरू छन्?
बिरो र सल्लाहकार बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग ICS (इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड) र LABA (लामो-अभिनय बीटा)दुई-Adrenergic एगोनिस्ट) ICS (इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरोइड) र LABA (लामो-अभिनय बीटा)दुई-Adrenergic एगोनिस्ट)
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति ब्राण्ड ब्रान्ड र जेनेरिक
जेनेरिक नाम के हो? फ्लुटिकासोन फुरुएट / विलान्टरॉल फ्लुटिकासोन प्रोपियनेट / सालमेटरोल
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ब्रियो इलिप्टा इनहेलर एडवाइर डिस्कस र जेनेरिक,
फ्लुटिकासोन एडवायर एचएफए मीटर-डोज इनहेलर (प्रति कार्यवाही)
मानक खुराक के हो? सीओपीडी मर्मत: ब्रियो इलिपटा १००/२25: १ पफ दैनिक रूपमा
दम: ब्रेओ इलिपटा १००/२। वा २००/२:: १ पुफ दैनिक रूपमा एक पटक
* मौखिक झोकाको जोखिम कम गर्न, सधैं प्रयोग गरेपछि मुख कुल्नुहोस् एडवाइर डिस्कस र जेनेरिक,
दम मर्मत: १ पुफ (१००/50०, २/०/50०, वा /००/50०) हरेक १२ घण्टा
COPD मर्मत: १ पफ (२/०/50०) हरेक १२ घण्टा
दमको मर्मतसम्भार: प्रत्येक १२ घण्टामा २ पुफहरू इनहेल गरियो
* मौखिक झोकाको जोखिम कम गर्न, सधैं प्रयोग गरेपछि मुख कुल्नुहोस्
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क १ 18 र अधिक उमेर वयस्क र children बर्ष र माथिका बच्चाहरु
शर्तों बनाम सल्लाहकार बनाएर
धेरै बिरामीहरू सीओपीडी वा गम्भीर दमबाट ग्रस्त हुन्छन्, जस्तै दमको हमलाको क्रममा घरघर निकाल्ने र सास फेर्न सक्ने लक्षणहरू छन्। ब्रियो (ब्रेओ भनेको के हो?) सीओपीडी वा दमको बिरामीहरूमा एक पटक प्रयोग हुने उपचार हो। यो १ 18 बर्ष र अधिक उमेरका बिरामीहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सल्लाहकार (सल्लाहकार के हो?) सीओपीडी वा दमको बिरामीहरूका लागि दुई पटकको उपचार हो। यो चार बर्ष वा सो भन्दा पुरानो बिरामीहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी औषधीहरू तीव्र ब्रोन्कोस्पाज्म वा दम रोगीहरूमा प्रयोग गर्न सकिदैन जुन ICS द्वारा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र कहिले काँही साँस प्रयोग गरिएको छोटो-अभिनय बीटा दुई -गोपनिष्टहरू (जस्तै अल्बुटेरोल, प्रोआयर एचएफए, प्रोभेन्टिल एचएफए, र भेन्टोलिन एचएफए को रूपमा ब्रान्ड नाम फारमहरूमा पनि परिचित छ)।
सर्त ब्रियो सल्लाह
दीर्घ-अवधि, एक पटक दैनिक, एयरफ्लो अवरोधको मर्मतसम्भार उपचार र सीओपीडी भएका बिरामीहरूमा एक्स्टर्बेशन कम गर्ने हो हैन
१ 18 बर्ष र अधिक उमेरका बिरामीहरूमा दमको एक पटक उपचार हो हैन
चार वर्ष र अधिक उमेरका बिरामीहरूमा दमाको दुई पटक मर्मतसम्भार उपचार हैन हो
दुई पटक दैनिक मर्मतसम्भार उपचार वायुप्रवाह अवरोध र सीओपीडी भएका बिरामीहरूलाई कम गर्ने उपचार हैन हो
के ब्रेओ वा सल्लाहकार अधिक प्रभावकारी छ?
छ महिनाको अनियमित, प्लेसबो-नियन्त्रणमा अध्ययन o०6 अस्थमा बिरामीहरुलाई एडोएयरसँग ब्रेओको तुलना गर्नु, दुबै उपचार समूहले एफईभी १ मा बराबरको सुधारको अनुभव गरे (बाध्य पर्ने एक्स्प्रेरी भोल्युम; एक गहिरा साँसको पछाडि एक सेकेन्डमा कति वायु निकास गर्न सकिन्छ) को एक उपाय, जीवन स्कोरको गुणस्तर, र दम नियन्त्रण स्कोर। त्यहाँ बढ्ने दरमा कुनै भिन्नता थिएन, र दुबै औषधि राम्रोसँग सहन गरिएको थियो।
तीन अध्ययन मध्यम र गम्भिर सीओपीडीको साथमा 40० बर्ष उमेरका बिरामीहरूमा ब्रेओ र सल्लाहलाई तुलना गर्नुहोस्। १२ हप्ताको अध्ययनको अन्त्यमा, अन्वेषकहरूले यो निष्कर्ष निकाले कि दुबै औषधिहरूले समान नैदानिक ​​सुधार ल्याए र दुबै औषधिहरूको समान सुरक्षा प्रोफाइल छ।
कभरेज र ब्रेव बनाम सल्लाहकारको लागत तुलना
ब्रियो र एडवाइर प्राय बीमाले ढाक्दछन् साथ साथै मेडिकेयर भाग डी। जेनेरिकहरू सामान्य रूपमा कम खर्चिलो भए पनि, केही बीमा कम्पनीहरूले सम्झौता सम्झौताको कारण ब्रान्ड एडवायर मन पराउँछन्। बीमा बिना ब्रेओको औसत मूल्य $ 5050० हो तर तपाईं यसलाई एकलकेयर कूपनको साथ $ २$ for मा लिन सक्नुहुन्छ। एडवायर डिस्कसको औसत मूल्य ब्रान्डको लागि $ 444 र जेनेरिकको लागि $ १० as जति कम हो।
मानक खुराक उदाहरण: २०० mcg / २ m mcg इनहेलर: १ पुफ दैनिक उदाहरण: एडवायर डिस्कस २ m० एमसीजी / m० एमसीजी: १ पुफ दैनिक रूपमा दुई पटक
विशिष्ट मेडिकेयर पार्ट डी कोपे $ 19- $ 400, भिन्न हुन्छ । 40- $ 400, भिन्न हुन्छ
एकलकेयर लागत9२9। $ १०
ब्रेओ बनाम सल्लाहकारको साझा साइड इफेक्टहरू
ब्रेओको साथ, सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू नासोफ्यारेन्जाइटिस (एउटा घाँटी संक्रमण), माथिल्लो श्वासप्रणालीको संक्रमण, मौखिक थ्रश (मुखमा फ fun्गस), र टाउको दुखाइ हो। सल्लाह साइड इफेक्ट समान छ, फारेन्जाइटिस को एक सानो उच्च घटना संग, साथ साथै जठरांत्र मुद्दाहरू जस्तै मतली, बान्ता, पखाला, र टाउको दुख्ने संग।
मौखिक मुटुको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्न, बिरामीहरूले जहिले पनि कुइहाल्नु पर्छ र पानीमा थुक्नु पर्छ ब्रीओ वा सल्लाहकारको प्रत्येक खुराक पछि।
सुरक्षाको सर्तमा, त्यहाँ अस्थमा सम्बन्धी मृत्युको बढ्दो जोखिम एकल LABA को प्रयोगले हुन्छ। जे होस्, एफडीए घोषणा गरियो २०१ 2017 मा कि ICS / LABA संयोजन जस्तै बिरो वा सल्लाहकारको कारण मृत्युको जोखिम बढ्ने छैन।
अन्य साइड इफेक्ट हुन सक्छ। साइड इफेक्टको पूर्ण सूचीको लागि तपाईको स्वास्थ्यसेवा पेशेवरसँग परामर्श लिनुहोस्।
नासोफ्यारेन्जाइटिस हो %% हो %%
माथिल्लो श्वसन पथ संक्रमण हो %% हो २१-२7%
ओरल थ्रश हो %% हो १--4%
टाउको दुखाई हो %% हो १२%
ग्रसनीशोथ हो दुई% हो १०-१-13%
मतली, बान्ता, पखाला हैन - हो %%
मुहान: डेलीमेड (ब्रेओ) , डेलीमेड (सल्लाहकार)
ब्रेओ बनाम सल्लाहकारको ड्रग अन्तर्क्रिया
किनकि ब्रेओ र एडवाइर दुबै फ्लुटिकासोन, साथै एक LABA समावेश गर्दछ, तिनीहरूसँग ड्रग अन्तरक्रियाको समान सूची छ। केहि औषधिहरू CYP3A4 अवरोधकर्ताहरू, औषधिहरूको स्तर बढाउँदै ब्रेओ र सल्लाहकारसँग अन्तर्क्रिया गर्छन्। एमएओ अवरोधक कोटी जस्तो सेलेगिलिन, एल्डेप्रिल, रासागिलिन, वा एजिलेक्ट, र ट्राइसाइक्लिक एन्टिप्रेसप्रेसन्ट कोटी एमिट्रिप्टिलाइन, ईलाभिल, नर्थ्रिप्टिलाइन वा पामेलरमा पनि केहि एन्टिडिप्रेसन्टहरू ब्रेयो र एडवायरसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्। बीटा ब्लकरहरू, जस्तै मेटोप्रोलोल वा एटेनोलोल, लूप डायरेटिक्स जस्तै फ्युरोसेमाइड, र थाइजाइड डायरेटिक्स जस्तै हाइड्रोक्लोरोथिजाइड, पनि ब्रेओ वा एडवायरसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्।
औषधि ड्रग क्लास ब्रियो सल्लाह
र अन्य CPY3A4 अवरोधकर्ताहरू हो हो
रासाजिलिन MAOI (मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधक) हो हो
र अन्य बीटा ब्लकरहरू हो हो
हाइड्रोक्लोरोथियासाइड लूप वा थियासाइड डायरेटिक्स हो हो
ब्रेओ बनाम चेतावनी। को चेतावनी
दुबै औषधि चेतावनीको लामो सूचीको साथ आउँदछन्।
ब्रियो वा सल्लाहकार COPD वा दमाको जीवनलाई जोखिममा पार्ने काममा शुरू गर्नु हुँदैन।
अधिक मात्राबाट बच्न, ब्रेओ वा सल्लाहकार तपाइँको डाक्टरले निर्देशन अनुसार निर्धारित डोजमा प्रयोग गर्नुपर्दछ, र अर्को LABA साथ लिनु हुँदैन।
कुल्ला गर्नुहोस् र पानी संग थुक्नुहोस् ब्रो वा सल्लाहकारको प्रत्येक खुराक पछि मौखिक थ्रस (खमीर) बाट बच्न।
निमोनियाको बढेको जोखिमको लागि मोनिटर गर्नुहोस्।
केही मेडिकल अवस्था वा औषधिको कारण दबाइएका प्रतिरक्षा प्रणाली भएका बिरामीहरू ब्रेओ वा एडवाइर लिदा संक्रमणको बढी जोखिममा हुन्छन्।
मौखिक स्टेरोइड (जस्तै प्रेडनिसोन) बाट बिरा वा सल्लाहकारमा बिरामीलाई स्थानान्तरण गर्दा सावधानी अपनाउनुहोस्।
रोगीहरूले सावधानीपूर्वक प्रणालीगत स्टेरॉइड अवशोषणका संकेतहरूको लागि निरीक्षण गरिनुपर्दछ, जस्तै हाइपरकोर्टिसिज्म र एड्रेनल सप्रेशन जब ब्रेयो वा एडवायर लिदा।
ब्रेओ वा एडवायरले जीवनलाई जोखिममा पार्ने विरोधाभासी ब्रोन्कोस्पासम (वायुमार्ग हाइपरप्रिट्सनेसनेस) निम्त्याउन सक्छ। यदि यो हुन्छ भने, बिरामीलाई छोटो अभिनय गर्ने ब्रोन्कोडाइलेटरको साथ उपचार गर्नुपर्नेछ।
लाबाले पल्स रेट वा रक्तचाप, साथै कार्डियाक एरिथमियामा पनि बढ्न सक्छ। मुटुको समस्या भएका बिरामीहरूमा सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
आईसीएसको दीर्घकालीन प्रयोगले फ्र्याक्चरको खतरा, साथै जलबिन्दु र मोतियाबिन्दु निम्त्याउन सक्छ।
रगतमा चिनी बढेको र पोटासियम घटाउन मोनिटर गर्नुहोस्।
बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूमा बृद्धि निगरानी गर्नुहोस्।
तत्कालको अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाहरूको लागि निरीक्षण गर्नुहोस् (खुजली, एंजियोएडेमा, दाग, खांसी, कम रक्तचाप), एनाफिलेक्सिस सहित। गम्भीर दुध प्रोटीन एलर्जी बिरामीहरूले ब्रेओ वा सल्लाहकार प्रयोग गर्नुहुन्न।
एडवाइर सावधानीका साथ केही आघातग्रस्त गडबडी वा थाइरोटोक्सिकोसिस बिरामीहरूको साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ।
त्यहाँ गर्भवती महिलाहरूमा बिरो र सल्लाहकारको पर्याप्त, राम्रोसँग नियन्त्रण नभएको अध्ययनहरू छैनन्। औषधि केवल गर्भावस्थामा प्रयोग गर्नुपर्नेछ यदि आमालाई हुने लाभ भ्रुणको लागि जोखिमभन्दा बढी हो, र तपाईंको डाक्टरको स्वीकृतिले मात्र। यदि तपाईं पहिले नै ब्रेओ वा सल्लाह लिइरहनुभएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनुहुन्छ भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
ब्रेओ बनाम सल्लाहकारको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
ब्रेओ भनेको के हो?
ब्रियोमा आईसीएस र लाबा हुन्छ र यो सीओपीडी वा दमको बिरामीहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो दिनमा एक पटक प्रयोग गरिन्छ र १ patients बर्ष वा सो भन्दा बढि बिरामीहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सल्लाह भनेको के हो?
एडवायरले एक ICS र LABA समावेश गर्दछ र COPD वा दम रोगीहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो दिनमा दुई पटक प्रयोग गरिन्छ र patients बर्ष वा सो भन्दा बढि बिरामीहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के ब्रेओ बनाम सल्लाहकार उस्तै हो?
दुबै औषधिहरूले समान आईसीएस (फ्लुटिकासोन) साथै एक LABA समावेश गर्दछ। ब्रेओमाको लाबालाई विलेन्टेरोल र सल्लाहकारमा लाबालाई सालमेटरोल भनिन्छ। दुबै औषधि एकदम समान छन् तर केहि भिन्नताहरू छन्। उदाहरणका लागि, एडवाइर दैनिक दुई पटक प्रयोग गरिन्छ, जबकि बिरो दैनिक एक पटक प्रयोग गरिन्छ।
के ब्रेओ बनाम सल्लाहकार राम्रो छ?
त्यो निर्भर छ। धेरै बिरामीहरूले दुबै दुबै दुबै दुबारा दुबै लक्षणको सुधार देख्छन्। तपाइँको डाक्टरले तपाइँलाई निर्णय लिन मद्दत गर्न सक्दछ कि क्या तपाइँको लागि ब्रेओ वा सल्लाहकार सही औषधि हो।
के म गर्भवती हुँदा ब्रेओ बनाम सल्लाहकार प्रयोग गर्न सक्छु?
किनकि गर्भवती महिलाहरूमा ब्रेओ र सल्लाहकारको मूल्या .्कन गरिएको छैन, केवल तपाईंको डाक्टरको स्वीकृतिमा औषधि प्रयोग गर्नुहोस् यदि उसले / उसले लाभ उठाउने जोखिमलाई बढी लिन्छ भने। यदि तपाईं पहिले नै ब्रेओ वा सल्लाहकार प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनुहुन्छ भने, चिकित्सकीय सल्लाहको लागि आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
के म मदिराको साथ ब्रेओ बनाम सल्लाहकार प्रयोग गर्न सक्छु?
का लागि निर्माताको जानकारी ब्रियो र सल्लाह रक्सीको उल्लेख गर्दैन। निर्देशनको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
दम रोकथाम गर्ने औषधीहरूले कसरी काम गर्छन्?
ब्रेओ र एडवायरमा आईसीएसले तपाईंको फोक्सोमा सूजन कम गर्न मद्दत गर्दछ, जबकि LABA ले मांसपेशिहरूलाई आराम दिन्छ र वायुमार्ग खोल्दछ। त्यसो गरेर तपाईको दम वा सीओपीडी लक्षणहरू सुधार्नु पर्छ।
के ब्रेओ सल्लाह भन्दा बढी महँगो छ?
यो तपाइँको बीमा योजना मा निर्भर गर्दछ। एडवायरको तुलनामा ब्रेओको मूल्य समान छ। तपाईं निर्माता कूपन प्रयोग गरेर वा कुपनको लागि SingleCare.com जाँच गरेर पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ।
के ब्रेओ र सिम्बिकोर्ट एउटै हो?
बिरो र Symbicort समान छ। ब्रेओमा आईसीएस फ्लूटीकासोन र LABA vilanterol हुन्छ। सिम्बिकोर्टमा आईसीएस पनि हुन्छ, बुडेसोनाइड पनि भनिन्छ, साथ साथै LABA, जसलाई फारमोटेरोल पनि भनिन्छ।
ब्रेओले तपाईंको फोक्सोको लागि के गर्छ?
ब्रेओमा आईसीएसले फोक्सोमा सूजन कम गर्न मद्दत गर्दछ, जबकि LABA ले मांसपेशाहरूलाई आराम दिन्छ र वायुमार्ग खोल्न मद्दत गर्दछ। यसले दम वा सीओपीडीको लक्षण सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
कुन इनहेलर सल्लाहसँग तुलना गर्न सकिन्छ?
डुलेरा (मोमेटासोन / फार्मोटेरोल), सिम्बिकोर्ट (बुडेसोनाइड / फार्मोटेरोल), र ब्रेओ (फ्लूटिकासोन / विलान्टेरोल) सबै एडवायर जस्तै छन्। यी सबै औषधीहरूले ICS र LABA समावेश गर्दछ।
कसरी जेम्स Conner लड्यो क्यान्सर र जित्यो
४० वर्षीया महिला को लागी सबै भन्दा राम्रो जन्म नियन्त्रण गोली
स्याउ साइडर सिरका रक्तचाप बढाउन सक्छ
लिपिटर को लागी जेनेरिक औषधि के हो
बीमा बिना नुस्खा को लागी कसरी तिर्ने